Stefvan Löfven oo xoojinaya ka hortagga faragalinta shisheeye - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Stefan Löfven, madaxa dawladda Sweden oo ka digay saameeynta quwadaha shisheeye ee doorashada. sawir: Wiktor Nummelin/TT
Stefvan Löfven oo xoojinaya ka hortagga faragalinta shisheeye
La daabacay måndag 20 mars 2017 kl 10.19
Reysal wasaaraha dalkaan Sweden Stefan Löfven ayaa sheegey in ay siyaadin doonaan sidii ay uga hortagi lahaayeen dal kasta oo isku deya in ay raad ku yeeshaan ama faragaliyaan doorashada baarlamaan ee dalkaan Sweden ka dhici doonta sanadka soo socda ee 2018-ka.
Reysal wasaare Löfven ayaa arrinkaas wuxuu ku soo bandhigey maqaal uu maanta ku soo qorey wargeyska Dagens Nyheter.
Reysal wasaare Stefan Löfven ayaa intaas ku darey in ciidamada sirdoonka dalkaani ay kordhin doonaan in ay xisbiyada dalkaan ka caawiyaan aqoon ahaan sidii ay uga gaashaaman lahaayeen in loo dhaco siraha iyo keydka qalabkooda komputer-ka iyo guud ahaanba sidii hey’adaha dalkaani ay ugu diyaargaroobi lahaayeen arrimaha la xiriira iska difaaca weerarada dhanka aaladda internet-ka.
Hey’adda dalkaan u qaabilsan badbaadinta iyo gurmadka deg degga ah ayaa iyaduna dhankeeda waxay kala hadli doontaa hey’adaha warfaafinta dalkaan iyo kuwa adeegsada aaladaha kala duwan ee xiriirka bulshada sidii ay isaga ilaalin lahaayeen weerarada la xiriira dhanka aaladaha kala duwan ee isgaarsiinta casriga ah.
Johan Wiktorin oo ah khabiir dhanka sirdoonka ah, isla markaasna ka hawlgala Akadamiyadda dagaalka ee dalkaan Sweden ayaa isagoo ka faaloonaya ujeedada reysal wasaare Löfven u qaadaey talabadaas, wuxuu yiri sidan soo socota:
-Maadaama dalkaan Sweden ay dhawaan ka bilaaban doonaan ololaha doorashooyinku, waxaa loo baahan yahay in la qaado wax kasta oo looga gaashaaman karo dhankaas.
Johan Wiktorin oo ah khabiir dhanka sirdoonka ah.
Reysal wasaare Stefan Lövfen ayaa maqaalkiisa wuxuu ku nuuxnuuxsadey in aan loo baahneyn in doorashada dalkaan Sweden ka dhici doonta 2018-ka, ay wax raad ah ku yeeshaan quwada shisheeye oo warar been abuur ah ku faafinaya aaladaha kala duwan ee warfaafinta casriga ah ee bulshadu isticmaasho, sida tusaale ahaan wixii ka dhacey doorashadii u danbeysey ee tartanka madaxtinimada dalka Mareykanka.